Lalana Digue, RN 7 Behenjy: olona roa matin’ny lozam-pifamoivoizana | NewsMada
Tetsy amin’ny lalana Digue, maty tsy tra-drano ny mpitondra moto scooter iray, nodomin’ny fiara 4X4 iray. Ankoatra ireo mpandeha enina naratra mafy tao anatin’ny taksiborosy Sprinter, tra-doza teny Behenjy, namoy ny ainy ihany koa ny olona iray. Omaly maraina ny nitrangan’ireo lozam-pifamoivoizana roa samy hafa ireo.
Nisesy ny lozam-pifamoivoizana, omaly. Maty nodomin’ny fiara 4×4 ny lehilahy iray nitondra moto scooter, omaly teny amin’ny lalana Digue Andranoambo, tokony ho tamin’ny 4 ora hariva. Araka ny fanazavana azo teny an-toerana, noho ny fisongonana fiara teo alohany ka nifanenany tamin’ny fiara 4×4 iray ny nahafaty ity lehilahy ity. Mafy ny fifandonana ka vaky mihitsy ny aroloha teny amin’ilay mpitondra moto. Vaky mihitsy ny lohany ary nitarika ny fahafatesany izany. Fantatra fa nitsoaka avy hatrany ilay fiara 4×4 taorian’izay. Tonga teny an-toerana ny polisy, ary efa nandray an-tanana ny famotorana.
Omaly ihany koa, nisehoana lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona iray tany amin’ny RN7 PK 53, Mandikanamana, fokontany Ihazolava, kaominina Behenjy, tokony ho tamin’ny 7 ora maraina. Taksiborosy Sprinter iray mampitohy an’Antananarivo sy i Fianarantsoa no nandeha mafy ka nivadika teo afovoan-dalana. Tsy vitan’izay anefa, nidona tamin’ny fiara 4×4 nijanona teo anoloany izy io. Ilay fiara 4×4 izay niandry ny lalana halalaka satria tsy omby ny tetezana. Vokatr’io fifandonana io, nifatratra tany amin’ny kamiao nifanena taminy niditra teo amin’ilay tetezana indray ilay fiara 4×4. Enina ny olona naratra tamin’izany, ary nisy iray maty kosa rehefa tonga tany amin’ny hopitaly Ambatolampy.
Hatramin’ny Karandalana, nahafaty olona
Niharan-doza ihany koa ny taksiborosy Karandalana tany amin’ny fokontany Talakimaso, kaominina Manjakatompo. Karandalana avy any Ambovombe hiakatra Antananarivo no nidona tany amin’ny sisin-dalana. Vokatry ny dona mafy, 25 ny naratra. Teny an-dalana ho any amin’ny hopitaly, maty ny vehivavy iray. Voalaza fa niteraka io loza io ny olana teknika.
Amin’ny ankapobeny, vokatry ny fandehanana mafy, tsy fitandremana ny mahatonga ny loza. Lahitokana ny aina, mila mitandrina ny rehetra. Misy hatrany ny fanentanana ataon’ny mpitandro filaminana, ny samy mpampisa fiara fitaterana, ny mpandeha, saingy miseho ihany ny loza. Sarotra ny mifehy ny fiara sy ny moto, sa ny olona no sarotra ny fahatsapany tena?